SBS Language | သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးဘယ်လိုရရှိနိုင်ပါသလဲ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးဘယ်လိုရရှိနိုင်ပါသလဲ။
သြစတြေးလျားနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်အချိန်နဲ့ဘယ်နေရာမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ ရက်ချိန်းကြိုယူထားလို့ရနိုင်သလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးမှာရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဆိုင်ရာ တစ်နိုင်ငံလုံး ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ချီထိုးပေးရေး နည်းဗျူဟာ COVID-19 Vaccine National Rollout Strategy ကနေ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ဘယ်သူ့ကို ဦးစားပေး ထိုးပေးသင့်သလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြထားသလို ဘယ်လိုနေရာမှာ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ထိုးပေးမလဲ ဆိုတာကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက် ဘယ်မှာကြိုတင်နေရာယူထားလို့ရနိုင်သလဲ ဆိုတာကိုသိရှိလိုပါက https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/ မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရနိုင်ပြီလားဆိုတာကိုစစ်ကြည့်ဖို့အတွက် https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ တဆင့်ပြီးတဆင့် ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သင်အသက် ၁၈နှစ် နဲ့အထက် ရှိပေမယ့် ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရတဲ့အထဲမှာမပါသေးဘူးဆိုရင် သင်ထိုးလို့ရတဲ့အချိန်ကျရင် အသိပေးဖို့ တောင်းဆိုထားလို့ရပါတယ်။
သြစတြေးလျားနိုင်ငံမှာ အသက် ၁၆နှစ်အောက်လူတွေဟာ ကာကွယ်ဆေးလို့မရသေးပါဘူး။
သင့်ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်နဲ့ရက်ချိန်းကြိုယူဖို့နဲ့ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို မိမိဘာသာစကားနဲ့ အောက်ပါလင့်မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။ https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language
ဘယ်ကာကွယ်ဆေးက သင့်တော်တယ်လို့ အကြံပြုထားပါသလဲ
Pfizer (Comirnaty) ကာကွယ်ဆေးကို အသက် ၆၀ အောက် လူတွေအတွက် ဦးစားပေး ထိုးပေးဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးကိုတော့ အသက် ၆၀ ကျော်သူတွေအတွက် ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်အနေနဲ့ အသက် ၁၈-၅၉ နှစ်ကြားဆိုပေမယ့် AstraZeneca ကာကွယ်ဆေး ထိုးလိုရင် မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်မှုလုပ်ပြီး ထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ရင် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်ပါတယ်။
Moderna ကာကွယ်ဆေးကိုတော့ အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့ အထက်ရှိသူတွေသာ ထိုးသင့်တယ်လို့ အကြံပြုထားပြီး စက်တင်ဘာလလောက်မှာ စတင်ထိုးပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ကာကွယ်ဆေး မှတ်တမ်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးကို ဘယ်သူတွေ ထိုးပြီးပြီလည်းဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့အတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ လူတချို့ရဲ့ အချက်အလက်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြေလျံ ကာကွယ်ဆေး အစီအစဉ် Australian Vaccination Program ကြီးမှူးသူတွေကနေ ထိုးပေးလိုက်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတစ်ချောင်းတိုင်းအတွက် လူနာတွေရဲ့ အချက်အလက်ကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။
မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို My Health Record အပြင် Medicare (Immunisation History Statement) မယ်ဒီခဲရဲ့ ကာကွယ်ဆေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းမှာ ဖော်ပြဖို့ မျှော်လင့်ရသလို ဒါမှမဟုတ် ထိုးပြီးတာနဲ့ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးကြောင်း အထောက်အထားအနေနဲ့ စာရွက်ထုတ်ပေးတာမျိုးလုပ်နိုင်ပြီး အဲဒီနောက် အီးမေးလ်နဲ့ နောက်တပ် မိတ္တူတစ်စုံ ပို့ပေးတာမျိုး လုပ်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးအားလုံးက အခမဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ သြစတြေးလျံ နိုင်ငံသားတွေ၊ အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့်ရသူတွေသာမက ဗီဇာသက်တမ်းနဲ့ နေထိုင်သူ အားလုံးအတွက်ပါ အခမဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ကျောင်းသားဗီဇာ၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်ဗီဇာ၊ အရည်အချင်းပြည့် ဗီဇာ၊ မိသားစုဗီဇာ၊ အိမ်ထောင်ဖက်ဗီဇာ၊ ဒုက္ခသည်၊ ခိုလှုံခွင့်တောင်းသူတွေ၊ ယာယီခိုလှုံခွင့် ဗီဇာရရှိသူတွေ၊ လူသားခြင်းစာနာမှု၊ နယ်ဒေသဆိုင်ရာဗီဇာ၊ ပေါင်းကူးဗီဇာ ဒါမှမဟုတ် စပယ်ရှယ်ဗီဇာနဲ့ နေထိုင်သူတွေလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးကို အခမဲ့ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိန်းသိမ်းရေး စင်တာမှာ နေထိုင်ရသူတွေနဲ့ ဗီဇာဖျက်သိမ်းခံရသူတွေပါ ကာကွယ်ဆေးကို အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
SBS ရဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာကို သင့်ဘာသာစကားနဲ့ sbs.com.au/coronavirus မှာ လေ့လာပါ။
အစိုးရရဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ
Department of Health - COVID-19 Vaccine information in your language.
Department of Home Affairs - COVID-19 information in your language.
သြစတြေးလျမှာ နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အနည်းဆုံး ၁.၅ မီတာအကွာမှာ နေထိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အအေးမိရောဂါ သို့မဟုတ် တုတ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာ ခံစားရရင် အိမ်မှာပဲနေပြီး ရောဂါစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့ စီစဉ်ပါ။
သင်နေထိုင်ရာ ပြည်နယ်နဲ့ ဒေသရဲ့ သတ်မှတ်ချက်ကို NSW, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia, Northern Territory, ACT, Tasmania မှာ အသီးသီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။